Masjiida Abubakar Kan Adaamatti argamutti Da’awaan akka hin godhamne dhoorkame - NuuralHudaa
Masjiida Abubakar Kan Adaamatti argamutti Da’awaan akka hin godhamne dhoorkame
On Jul 18, 2018 49
Masjiidni Abubakar Adaamaa ganda 11 kan argamu yoo tahu, namoonni lama kanneen miseensa koree Masjiidichaa turan Obbo Abdussalaam Amaanii fi obboo Turee Aadam masjiidichatti da’awaan akka hin godhamne kan dhoorkan tahuu gabaasni arganne ni mul’isa. Arba’aa hardhaa Salaata Zuhrii booda Daa’iin beekkamaa fi Jaalatamaan Ustaaz Guutumaan Imaama masjiidichaa hayyamsiisuun da’awaa godhuuf yeroo olkahu namoonni lamaan kunniin kan dhoorgan tahuun beekameera.
Ummanni Da’awaa hordofaa ture gocha namoota koree masjiidicha tahan kanaan dallanuun Takbiiraadhaan mormii isaanii kan ibsatan yoo tahu, kanuma hordofuun hawaasni jeequmsa uumame qabbaneessuun walgahii kan taa’an tahuu gabaasni arganne ni ibsa. Walgahii kana irrattis namoonni lamaan koree masjiidichaa keessaa akka bahan, kun yoo hin tahin ammoo ummanni tarkaanfii biroo kan fudhatu tahuu ifatti gaafatee jira.
Odeeyfannoo walqabateen miseensonni koree masjiidichaa lamaan kunniin torbee dabre keessa Imaama Masjiida Abubaka rkan tahan Sheik Abdulqaadir Umar imaamummaa irraa buusuuf dhiibbaa hamaa irratti godhaa kan turan tahuun beekameera. Namoonni kunniin Imaamichaan nutu asitti si ramade waan taheef si ari’uufis mirga qabna jechuun mindaa isaanii dhoorgatanii kan turan tahuu odeeyfannoon argame ni mul’isa. Guyyaa kaleessaa Imaamonni, du’aatannoo fi jaarsoliin biyyaa rakkina san furuun araara kan buusan tahus, namoonni kun har’as masjiidicha keessatti jeequmsa biroo maliif akka uuman kan hin beekamin tahuu odeeyfannoon ni ibsa.
May 20, 2022 sa;aa 5:13 pm Update tahe